Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Bogaadiyay Booliska Tog-dheer oo uu Sheegay Inay Fashiliyeen Hawl Gal Argagixiso | Somaliland247's Blog
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Bogaadiyay Booliska Tog-dheer oo uu Sheegay Inay Fashiliyeen Hawl Gal Argagixiso
Filed under: NEWS — somaliland247 @ 5:55 pm
Hargeysa (HWN)- Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Gen. Maxamed Saqadhi Dubad, ayaa bogaadiyay Ciidanka Booliska Gobolka Tog-dheer oo uu sheegay inay fashiliyeen wax uu ugu yeedhay hawl gal argagixiso oo lagu carqaladeynayay doorashada madaxtooyada ee la filayo inay dalka ka qabsoonto 26-ka Bishan June.
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Gen. Maxamed Saqadhi Dubad
“Waxaan ammaan balaadhan iyo mahad naq u soo jeedinayaa Ciidanka Booliska ee Gobolka Togdheer ee geesinimada sameeyay ee fashilayay hawl galka argagixiso ee la doonayay in lagu carqaladeeyo olalaha doorashada madaxtooyada ee dalka ka socda isla markaana lagu waxyeeleeyo masuuliyiinta xisbiyada qaranka,”ayuu yidhi Taliyaha Ciidanka Boolisku.
Gen. Maxamed Saqadhi Dubad, oo u waramayay qaar ka mid ah saxaafada maxaliga ah wuxuu sheegay in ciidanka Booliska Gobolka Togdheer ay qabteen 11- qof oo falal argagixiso qorsheynayay oo isku urursaday Guri ku yaala xaafada Barwaaqo ee Magaalada Burco, waxaana iska horimaad dhex maray Booliska iyo raggaasi ku dhintay askari baadhe ah halka ay ku dhaawacmeen Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Tog-dheer Yuusuf Shire Cabdi iyo Taliyaha Saldhiga dhexe ee Booliska Burco.
Taliyuhu wuxuu intaasi ku daray in dadka loo soo qab qabtay falkan ay ka kooban yihiin 7 Rag ah iyo 4 Haween ah, isla markaana ay socoto baadhis xoog leh oo ciidanka Boolisku ku hayaan.
Dhinaca kale Badhasaabka Gobolka Togdheer Md. Jaamac Cabdilaahi Biin, ayaa isaguna dhinaciisa ammaan balaadhan u soo jeediyay ciidanka Booliska gobolka iyo dadweynaha reer Burco oo uu tilmaamay inay booliska ku soo wargeliyeen kooxdan oo uu ku sifeeyay argagixiso.
Badhasaabku wuu ka gaabsaday in 11-kan qof ay yihiin reer Burco iyo inay ka yimaadeen meelo kale, waxaanu sheegay inaanu arrintan xiligan ka hadlayn hase yeeshee ay socoto baadhis xoogleh oo uu carabka ku dhuftay inay wadaan ciidanka Boolisku.